Ruo ngwa 4.000 gam akporo nwere ike iledo gị | Akụkọ akụrụngwa
Otu ikpeazụ akụkọ ụlọ ọrụ nyocha achọpụtala na enwere ike ịnwe ọtụtụ puku ngwa gam akporo ndị butere ya smartphones nke ikpo okwu na na ha na-anakọta ozi banyere ọrụ niile. Dị ka akọwapụtara, achọpụtala okwu 3 nwere ike ibudata na Google Play. Ya mere nnweta onye ọrụ dị kpọmkwem karịa ime ya site na mpụga.
Otu n'ime ikpe bụ nke Soniac, ngwa dị na ụdị Telegram — ya bụ, ozi izi ozi ozugbo - na-achịkọta ozi niile dị na sava ndị dị na mpụga. Na onye ọrụ ya na-abanye na-enweghị ọkwa ọkwa. Ngwa ndị ọzọ achọpụtara na Google Play bụ Hulk Messenger na Troy Nkata. Ha niile nwere profaịlụ otu ngwa ahụ. Ugbu a, atọ ndị a ngwa na-erite site SpyWare SonicSpy.
El modus operandi nke ngwa ndị a dị mfe. Onye okike nwere ike ime iwu iri asaa na abụọ. Ọ bụ ezie na a na-emesi ya ike ihe kachasị eme bụ ịhụ otu akara ngosi ngwa ngwa si wepu na desktọọpụ. Ọ bụ ụzọ kachasị mma iji hụ ya. Na ndabere ọ ga-edekọ mkparịta ụka ọdịyo, na-anakọta ozi site na kọntaktị anyị na ịchekwa mkparịta ụka ederede. Ha niile yiri ka ha dabere na Iran.
Ọzọkwa, site na Lookout - ụlọ ọrụ achọpụtala malware- gosi na ndia Ezigbo ngwa egwu ejirila ihe ruru 5.000 nbudata (dika o mere na Soniac). Na mgbakwunye, ha na-atụ aro ka ebudata nbudata niile site na Google Play. Nke a bụ ebe ị na-enwekarị ike ịchịkwa ngwa ndị a dị njọ. Anyị na-echeta na gam akporo bụ ikpo okwu na-enye gị ohere ịwụnye software site na ndị ọzọ na-enweghị ịgafe ụlọ ọrụ ngwa ahịa ha; naanị site na nbudata faịlụ ahụ na ngwa mgbakwunye na ekwentị anyị, anyị nwere ike ịga n'ihu na ntinye ya na ọnụ ya. Na-adọ aka ná ntị ka ị ghara pịa njikọ nke obi abụọ sitere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ruo 4.000 gam akporo ngwa ọdịnala nwere ike n'iledo na ị
Ọ dị mma ibudata ngwa site na Google Play mana ọ bụghị n'ihi nke ahụ ị ga-eweda nche gị.
Enwere ọtụtụ akụkọ akụkọ na-ewepụla ngwa ọjọọ dị na ụlọ ahịa gọọmentị. Withfọdụ nwere ọtụtụ puku ihe nbudata tupu achọpụta ha.
Mkpa: antivirus maka mkpanaka na ọgụgụ isi.
Ruben gallardo dijo
Nke ziri ezi, David.
Karịsịa, ị ga-enwerịrị ihe ikpeazụ ị tụrụ aka: ọgụgụ isi.
Daalụ maka ịza ajụjụ ma gụọ anyị.
Zaghachi Ruben Gallardo
Amazon na-echeta iko adịgboroja iji hụ chi jiri n'ehihie nke August 21, 2017
NASA chọrọ ịnwale ma ọ ga-ekwe omume ichebe ụwa site na mbara igwe